Kugadzira Roar 2, wongororo yeiyi inonakidza Bluetooth mutauri | IPhone nhau
Kana paine chimwe chinhu chinotsanangudza iyo yeCreative brand, ndiyo isina mhosva trajectory yakabatana nenyika yekurira. Iyo kambani yanga iri mundima iyi kwemakore mazhinji, zvakaoma kwazvo kufuratira mune yayo katarogu yeBluetooth mutauri zvigadzirwa senge ichangoburwa Sound Blaster Roar 2.
Uyu mutauri ndiyo nhaka yechizvarwa chekutanga, a 10 bluetooth mutauri iyo yakabvisa pachigaro mazhinji emhando yepamusoro nechinhu chakachipa asi chakazara uye chine mutsindo usingarambike. Iyo Roar 2 inouya kuzosimbisa chinzvimbo chayo mukati merondedzero ye vakurukuri vakanyanya kunaka.
1 Inzwi Blaster Yakasikwa Roar 2, yekutanga kuratidzwa
2 Kubatanidza kweanenge zvese zvinhu
3 Kusvikira maawa gumi nemana ekuzvimirira
4 Roar 2 yaani?
Inzwi Blaster Yakasikwa Roar 2, yekutanga kuratidzwa
Mushure mekuve neyokutanga Kugadzira Roar, Ini handina kukwanisa kubatsira asi kuwana izvi yechipiri vhezheni yechigadzirwa.
Izvo zvirevo zvaive pachena: mhando imwechete yezwi asi 20% diki muhukuru. Kune izvo isu tinofanirwa kuwedzera eesthetic inobata padanho rekugadzira, zvirinani zvinhu zveiyo kesi uye inokanganisa kubatana kuti uwane zvakazara mazviri.
Ndinofanira kutaura kuti pakutanga zvaiita senge zvisinganzwisisike kwandiri kuti iyi Roar 2 yaikwanisa kuchengetedza mhando imwechete yekurira senge yekutanga chizvarwa modhi mushure mekudzikira kwakakura muhukuru. Bhawa raive rakakwira chaizvo asi vanoita kunge vakaita basa rakakura ne kuiswa kutsva kwawakapa maspika, kuchengetedza nzvimbo yakawanda mukati mekesi.
Mushure mekubatanidza yangu iPhone kuburikidza neBluetooth kune iyo Roar 2, kumeso kwangu kushamisika kunosimbisa iyo yakanaka omen. Mutauri anonzwika zvakanaka zvinoshamisa, zvese zvakaderera uye zvakakwirira mavhoriyamu kwataigona kukanganisa zvirevo zvishanu mukati.
Kanganwa iyo tinny kurira iyo 90% yeanotakurika masipika pamusika anopa. Iyo Roar 2 inotamba mune imwe ligi uye iwe unodya pane ingangoita makwikwi ako ese akananga. Mutauri we2,5-inch inoburitsa yakaderera uye yepakati mafrifiti inoita kuti tifunge kuti iyo Roar 2 ine subwoofer mukati, mhedzisiro inowedzeredzwa neyaviri mairi radiator pamativi uye kuti isu tichaona kudedera mukubereka kweye bass .
Kana zvichiri kutaridza kwatiri kuti iyo Kugadzira Roar 2 inowira pasi pemabhasi, tinogona kuwedzera iwo neiyo TeraBass modhi Inoitwa ne bhatani riri kumashure kwespika.
Nezve kurira kwekufamba, iyo Roar 2 inomira yayo yakachena uye yakajeka kurira. Ini ndinoti zvakare ichi ndicho chinoshamisira chinotakurika mutauri, saka isu tinofanirwa kukanganwa nezve izvo zvine ruzha uye zvinogumbura izvo zvakaderera-zvigadzirwa zvigadzirwa zvinotambura, muCreative mutauri tinogona kunakidzwa neyedu kufarira mimhanzi genre neayo ese nuances, kunyangwe mune akanyanya mavhoriyamu.
Kubatanidza kweanenge zvese zvinhu
Kana uine kubatana kweBluetooth isina kukwana iwe, heino runyorwa rwevose kubatana kwakapihwa neRoar 2:
Inobatsira (3,5 mm jack)
USB (kana iwe ukabatanidza nhare yako
Kune vakuru, tinogona ishandise seyakarekodha izwi kana sekusununguka-maoko kana isu takabatanidza nharembozha yedu.
Vamwe vashandisi vanoshaya kuvepo kweIRDA neremote control kudzora zvimwe zvinhu zvekutamba usinga fambe kuenda kune mutauri. Izvo ndezvimwe zvisingambokuvadza asi kwandiri, handizvione sekuwedzera kwakakosha nekuti kushandisa kubatana kweBluetooth, ndinoshandisa iyo iPhone pachayo nekuda kwechinangwa ichi.
Kusvikira maawa gumi nemana ekuzvimirira
Iyo 6.000 mAh bhatiri muCreative Roar 2 inopa kusvika maawa gumi nemashanu ekuzvimirira, chimiro chinogona kusiyanisa zvakanyanya zvichienderana nevhoriyamu uye kubatana kwatiri kushandisa kuridza mimhanzi.
Kuti utarise kuzvimiririra kwemukurukuri, tinogona kushandisa chiratidzo chekuchaja chinoonekwa pane iyo iPhone padyo nechiratidzo cheBluetooth kana tikada, iyo Roar 2 ine chinozunguzirwa Panel pamwe LEDs matatu uye izvo zvinomiririra mamiriro emubhadharo.
Sezvo bhatiri rinodonha, iyo Roar 2 inoderedza huwandu hwehuwandu kuti iwedzere kuzvitonga kuzhinji.
Chekupedzisira, kana tichifanira kurongedza tinogona kushandisa iyo yakavakirwa-mukati magetsi adapter kana shandisa iyo microUSB kubatana. Iyo inokurumidza nzira ndiyojaja uye ichiri kutora maawa maviri nehafu kupedzisa iyo yekuchaja kutenderera, nguva inowedzera zvakanyanya kana tikashandisa USB kubatana.
Roar 2 yaani?
Ndingakurudzira mutauri uyu kune chero munhu arikutsvaga Mutauri weBluetooth asi iine mhando inonzwika yemhando, izvo zvinoita kuti unakirwe nemumhanzi waunoridza pairi.
Icho chikwata icho inorema 1 Kg uye ane masimba, kunyangwe akaomesesa, usazviite mutauri waunogona kuenda newe kwese kwese. Yakagadzirirwa kuiswa pamusoro uye kusiiwa ipapo iwe uchiteerera kumimhanzi.
Ndinoziva ichi chinhu chekupedzisira chandangoti chinganzwika kusanzwisisika asi pese pandinoona vanhu vazhinji mumugwagwa vane masipika eBluetooth vachikwidza avo Madhindindi Uye nokutendeseka, iyo Roar 2 yakanga isina kugadzirirwa izvo. Inogona kushandiswa mune inotyisakune pasina matambudziko asi sekutaura kwangu, zviri nyore kuisiya munzvimbo yakatarwa kuti isu tigadzikane uye kuti mukurukuri awane zvakanakisa pachayo, pasina kuisa pangozi kutendeseka kwayo uye neyaavo vanongoerekana varira mativi pamativi ayo.
Kana iwe wakaneta netambo, yakakura kwazvo 2.1 michina yausingatore mukana nayo nekuti unonetsa muvakidzani wako, unoda mhando dzese dzekubatanidza uye nesarudzo yekutora chero kupi panguva yakatarwa nguva, iyo Roar 2 ndiye mutauri wako.
El Creative Sound Blaster Roar 2 ndeye 10 mutauri mumativi ese. Hunhu hwekurira hunonakidza, kuzvimiririra kwayo kwakakwira kune simba rinopihwa nevatauri, dhizaini yacho ine hungwaru uye inoyevedza asi zvakare, kubatana kwayo kunoita kuti ishandiswe nemidziyo yakawanda. Unogona here kukumbira zvimwe?
Zviripachena kuti zvese izvi zvinoita Roar 2 isiri chigadzirwa chine hupfumi kunyangwe chiri muchikamu chayo, ndizvo imwe yemakwikwi zvakanyanya muhunhu-mutengo chiyero. Kana iwe uchibheja pane uyu mutauri, iwe unofanirwa kushandura iyo chip uye funga nezve inotakurika mutauri neimwe nzira isiri yawakajaira iwe.
Kugadzira Roar 2
Dhizaini uye gadzira mhando
Vamwe vashandisi vangarasikirwa neremote control
NeBluetooth, kumashure hiss kunonzwika
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Kugadzira Roar 2, mutauri weBluetooth unobatanidza hutungamiriri hwayo
Apple yakaramba kupa kodhi sosi yeIOS kuChina